नेपालको बारेमा धावा बोल्ने सरिता गिरीलाई चप्पलले गालामा हा’न्दै फु’टाले एक युवाले टिभी (भिडियोसहित) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/नेपालको बारेमा धावा बोल्ने सरिता गिरीलाई चप्पलले गालामा हा’न्दै फु’टाले एक युवाले टिभी (भिडियोसहित)
यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । ति युवा को हुन् ? कहाँका हुुन् भन्ने कुरा भने यो भिडियोवाट खुल्दैन । सरिता गिरीको अभिब्यक्तिको अहिले निकै आलोचना भइरहेको छ । केही युवाहरु वुधवार राति उनको घर अगाडी कालो झण्डा लिएर बिरोधमा पनि पुगेका थिए । उनीहरुले सरितालाई भारत फर्कन भन्दै नारावाजी समेत गरेका थिए । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
मोरङमा अचम्म! मामा र भाञ्जी एउटै वेडमा रंगेहात समातिएपछि… (भिडियो)